Songandina Archives - Page 901 sur 1062 -
Fiarana zandary Manamboninahitra : Nitaomana rongony 20 gony
Fiarana zandary manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena no saron’ny polisy nitondra rongony 20 gony tao Ihosy, omaly vao maraim-be. Olona telo niaraka tamin’ny mpamily, nanao fanamiana miaraka amin’ny galona, izay nisandoka ho zandary no tao …Tohiny
Fanomezana fanafody kankana tanyToliara : Efa nandray andraikitra ny ministera roa tonta
Nandray andraikitra avy hatrany ary natsahatra aloha izany ny fizarana ireo fanafody kankana izay namparary ireo ankizy miisa 77 tao amin’ny EPP Anketa tao Toliary, hoy ny minisitry ny fahasalamana ny profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana, …Tohiny
Fiatrehana ny fifidianana : Manomboka ny fanentanana ny olom-pirenena
Mitohy hatrany ny fikarakarana ny fifidianana izay ataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Natao izany, ahafahana manarina ny lesoka teo aloha sy hahatontosana ilay vina efa nobanjinina, dia ny fifidianana mangaraharaha. …Tohiny
Holafitry ny mpitsara : Fanosoram-potaka no nataon’ny mpirakidraharaha
Fanalam-baraka ny mpisolovava no nataon’ny sekretera jeneralin’ ny mpirakidraharaha milaza fa « ny mpisolovava dia mpanova didim-pitsarana » nandritra ny fiakaran’ny sekretera jeneralin’ny mpirakidraharaha io tao amin’ny fandaharan’ny fahitalavitra iray teto an-drenivohitra. Noho io zava- misy io …Tohiny
« 1 … 899 900 901 902 903 … 1 062 »
Raikitra amin’izay ny tena asa. Taorian’ny fametrahana ny vato fehizoro, nosantarina omaly ny fanombohan’ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Afaka telo taona eo ho eo, ho afaka handray fiaramanidina efatra miaraka ny seranam-piamanidina vaovao ...Tohiny